शर्मा बिरुद्ध गिरोहनै सक्रिय ! 'ठाडो अभिब्यक्ती'
अन्तर समझ,काठमाडौं ।
लौहपुरुष गणेशमान सिंहले त्यसै भनेका होनन् । जनता... भनेर । सत्य सुन्न सक्नुपर्छ । केलाउन सक्नुपर्छ । बुझ्नु सक्नु पर्छ । लहै लहैमा कसैको सर्पोट गर्नु पनि हुदैन् । कसैलाई छिछि दुरदुर गर्नु पनि हुदैन ।
पछिल्लो समय, सामाजिक सञ्जाल फेसबुक होस या केहि अनलाइन सञ्चार माध्यम । शर्मा बिरुद्ध 'ठाडो अभिब्यक्ती' भेटिन्छ ।
कति सम्म सकेका भन्न पनि ...? तत्कालिन आन्तरिक राजश्व विभागका प्रमुख महानिर्देशक चुणामणि शर्मालाई अख्तियारले पक्रियो । पक्रिएको कुरा साँचो हो ।
तर के हो सत्य ? के हो असत्य ? के हो न्याय ? के हो अन्याय ? कानुन के हो ? त्यो जान्न नपर्ने ? के यो असल नागरिकको जिम्मेवार बहन गर्न नपर्ने ? होइन र ?
अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गर्यो । सर्वोच्च अदालतले यथेस्ट प्रमाण र आधार नभएको भन्दै छाड्यो । मुद्धा विशेषमा छ । उता , गत आइतबार बुढानिलकण्ठ स्थित शर्माको घरको गेटमा बम पड्काउने प्रयास भयो । बम राती १ बजे राखिएको थियो । सो बम पड्किएको भए त्यो टोलका धेरै घर परिवारमा ठुलो मानवीय क्षती समेत हुने थियो । क्षती रोकीयो । यसैले बताउँछ, शर्मा बिरुद्ध गिरोहनै सक्रिय छ !
गिरोहको बारेमा आंशिक पत्ता लागेको स्रोतको दाबी छ । नियोजितरुपमा जुन गिरोहले सक्रियता देखाएको थियो । सो समुहको आकांक्षा पुर्ती नभए पछि अनेक हत्कण्डा प्रयोग गरेको बुझिएको छ ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर २ महादेव खोला टोलमा रहेको उनको घरको गेटमा सिलिन्डर बम राख्नेहरुको भिडियो फुटेजमा प्रस्टै ५ जना चिनिने अनुहार देखिन्छ । तर, एक अनलाईनले बमनै शर्माले राख्न भ्याए भनेर खबर उतारो । पत्रकारीता भनेको उत्तेजना होइन ? कसैको झुटमा परेर समाचार बनाउदाँ त्यसले के असर गर्छ ? त्यो ध्यान दिन जरुरी छ ।
पत्रकार आचार सहिंतालाई ख्याल गरेर समाचार पस्किनु बुद्धिमानी हुन्छ । पत्रकारीता न्याय संगत हुन जरुरी छ । जसको घरमा सिलिण्डर बम राखियो,उ आफै संलग्न छ भनेर हावादारी समाचार पस्किनु उपयुक्त हुदैँन् । यथेस्ट प्रमाण पन्छाएर लहैलहैमा लठैत पत्रकारिताले समाज भड्काउँछ । जिम्मेवारबाट पन्छाउछ ? हो पड्कीएको बमको चौतर्फी चर्चा चल्यो । दुई वटा सिलिन्डर बम जोडेर शर्माको घरको गेटमा आगो लगाइयो ।
सिलिन्डर बम पड्काउने क्रममा को को सहभागी भए सबै भिडियो उपलब्ध गराउछु भनिरहदाँ शर्मा माथी नियोजित प्रहार गर्नु, पत्रकारको धर्म र नैतिकतामा पर्दैन । मानविय संबेदनशिलता प्रति अलिकती पनि जिम्मेवार बन्न नपर्ने ?
शर्मा र उनको परिवार स्वयम असुरक्षित भएकाछन् ,राज्यले सुरक्षा दिनुपर्छ । सुरक्षा निकायलाई आफू प्रति केन्द्रीत गराउन घरको गेटमा बम पड्काउन लगाएको भन्दै गर्दा त्यही परिवारले आफुसँग भएको भिडियो फुटेज उपलब्ध गराउँछु भन्छ भने सामान्य ब्यक्तीले पनि आंकलन काट्न सक्छ । सत्य के हो ?
ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि खेद्छ भन्ने हाम्रो समाज । यथार्थता, निस्पक्षता पनि केलाउनुपर्छ । दोषीलाई छुट दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो मनसाय फिटिक्कै छैन् तर जो कोही पनि कानुनी घेरा भन्दा माथि छैनन् र हुनु पनि हुदैनन् ।
सत्ता र सम्पतीको आडमा क्षणिक आनन्दका लागि कसैलाई नियोजित बद्नाम गराउने , सामान्य नागरिक सरह जिउन पनि नदिने । आततायी घटना फैलाउने ,समाज भड्काउने तर्फ उन्मुख हुन खोज्नेहरु राज्य बिरोधी हुन् ।
पछिल्लो समय शर्मा बिरुद्ध गिरोहनै सक्रिय भएको बुझिन्छ । सुरक्षा पाउन आफैले घरमा बम राखे भन्ने सम्मका समाचार आउनुले पनि उनी माथी को कीन कसरी ? लागि रहेकाछन् । सुरक्षा तथा संबन्धित निकायका लागि खोजीको विषय हो ।
आन्तरिक राजश्व विभाग एबं कर फछ्र्यौट आयोगको सदस्यसचिव रहेको समयमा शर्माले अर्बौंको भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले उनीमाथि मुद्दा चलाएको छ ।
तर, सर्वोच्च अदालतले प्रमाण आधारहरु कमजोर देखिएको भन्दै उनलाई लगाइएका आरोपका बारेमा गम्भिर बन्न निर्देशन गरेको अवस्था छ ।
राज्यले के हेरेको छ ? कतै कालोमोसो आतंक ,कतै सिलिण्डर बम आतंक !
जब मध्यरातमा चूडामणि शर्माको गेटमा आगो दन्कियो…
चुडामणी शर्माको घर कडा सुरक्षा घेरामा, बुढालिनकण्ठमा सिलिण्डर बम आतंक